Chinese-English-Myanmar Dictionary — MYSTERY ZILLION
September 2009 edited February 2010 in Project
ကျွန်တော်တို့ MZ ဝိုင်းတော်သားတွေရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့် Onagai(ဘာအဓိပ္ပါယ်နဲ့ပေးထားလည်းတော့မသိ) ဆိုတဲ့ Eng-Myan dictionary လေးတော့ရုပ်လုံးပေါ်လားခဲ့ပါပြီ
ဒါကြောင့်ဒါလေးနဲ့ ကျေနပ်မနေကြပဲ နောက်တဆင့်အဖြစ် chi-myan project စလုပ်သင့်ပြီလို့ထင်ပါတယ်
အခုလုပ်ထားမှ နောင်ကျရင် မြန်မာတွေ ကမ္ဘာမှာရင်ပေါင်းတန်းနိူင်မှာပါ
(2010 ကျော်ရင်အရာရာတိုင်း တစစပြောင်းလဲလာတော့မှာပါ)
အရင်တုန်းကလည်း ကိုစေတန်ကို လုပ်ဖို့ပြောထားပါတယ်
အကြောင်းမပြန်တာ တော်တော်ကြာနေလို့ (သူ မအားတာလည်းဖြစ်မှာပါ)
ဒါကြောင့် member များဘယ်လိုသဘောရကြလည်းမသိ
ကျွန်တော်က software ပိုင်းကမဟုတ်တော့ data အပိုင်းကိုတော့တာဝန်ယူပေးနိူင်ပါတယ်
(dictionary လုပ်တဲ့နည်းပညာကို အခမဲ့မဖြန့်ဝေနိူင်ရင်ပြောပါ သင့်တော်တဲ့ညဏ်ပူဇော်ခပေးပါမယ်)
အရမ်းကောင်းပါတယ် ကို Orb ရေ...... ကျွန်တော်တို့လည်း တတ်အားသရွေ့ ကူညီပါ့မယ်... အခုတောင် ကိုစေတန်ရဲ့ JQuery Offline Dictionary ကို စာလုံးတွေအများကြီးထပ်ထည့်ပေးနေပါတယ်... Dictionary လုပ်တဲ့နည်းပညာကိုလည်း ကိုစေတန်က ဒီနှစ်အကုန်ပိုင်းလောက်မှာ အားလုံးကို အခမဲ့(free) ပေးမယ်လို့ပြောထားပါတယ်.... (အဲ့ဒီတုန်းက စိတ်တိုတိုနဲ့ပြောလိုက်တာလားတော့သိ၀ူး... ) အခုလောလော ဆယ်တော့ ကိုစေတန်လည်း အလုပ်တွေများနေဦးမှာပါ.... ကျွန်တော်လည်း Thailand - Myanmar - English Dictionary လေးတစ်ခုလုပ်ဖို့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ တိုင်ပင်နေပါတယ်...
ကျွန်တော်လည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးပါ့မယ်...
program ကိုပြောတာလား??? မအိအိကိုယ်ပိုင်ရေးထားတဲ့ english myanmar VB 6.0 version complete မပီးသေးရှိပါတယ်အလကားရချင်ရင်လက်ရှိမပီးသေးတာကိုပေးမယ် complete version ရချင်ရင်တော့တမျိုးပေါ့နော data မသွင်းနိုင်တာနဲ ့2003 လောက်မှာရေးလက်စကိုရပ်ထားတာပါ program ကရေးရတာမခက်ဘူးရေးတတ်တာကိုး ..အဲ..အဲ program လဲပီးလုပီးခင်ဖြစ်တော့မှ data သွင်းဖို ့မလွယ်တာနဲ ့ရပ်ထားလိုက်တာပါ
မမအိအိ...... vb6နဲ့ရေးထားတာဆိုတော့ ခက်လားဟင်. ကျွန်တော်က vb6ကို လုံး၀ နီးနီး မတတ်တာ... Vb ကိုပေါ့နော်.. လွယ်တယ်လို့ပြောလို့ လေ့လာကြည့်တာ အရမ်းခက်နေလို့ပါ... အမ ရေးလက်စ လေးတွေကို နည်းနည်းဖြစ်ဖြစ် Share ပေးပါနော်... ပညာယူချင်လို့ပါခင်ဗျာ.....
(software နဲ့ပတ်သက်ရင် ဘာဘာဘာမှမသိပါ)
(data ပေးသွင်းပေးမယ်ဆိုရင်လည်းပြောပါ email ကတဆင့်ပို့ပေးပါမယ်)
ကောင်းပါတယ်ခင်ဗျာ.. Data ရှိတဲ့အတွက်လည်း ပိုမြန်မယ်ထင်တယ်ခင်ဗျာ..
ပြီးတော့ Syllabus breaking အတွက်ကတော့ နည်းနည်းပြသနာရှိမလား မပြောတတ်ဘူး..
ခု Ornagai ကို ကိုသာသာမှ တဆင့် ၀ိဇ္ဖာကို လုပ်တဲ့ သူက ဆက်လုပ်နေတယ်ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ
ခု လုပ်ကြမှာက Ornagai လိုမျိုး Web Based လား. ဒါမှမဟုတ် ကိုစိုးမင်းရဲ့ wxPyDict လိုမျိုး platform based application လုပ်ကြမှာလား မသိ..
ဘာပဲလုပ်လုပ်.. data ရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ အဲလောက် မခက်လောက်ဘူးထင်ပါတယ်..
data သွင်းပေးတဲ့လူတွေကသွင်းပေး မအိအိ က VB6လေးနဲ့ပရိုဂရမ်လေး ထုတ်ပေးလိုက် မယ်ဆိုရင် တော့ရှယ်ပဲဗျို့.... ခုလိုဆိုတော့လဲ တယ်ဟုတ် ဒို့ဖိုရမ် က ဒကိရှင်နရီသုံးခုမြောက်ထုတ်တော့မှာပေါ့နော်....:67::67::67: ဒက်ရှင်နရ ထုတ်တာ ဒေတာတွေရှိရင်မြန်လားဟင်.... ကျတော်က ပရိုဂရမ် လုံးဝမသိလို့မေးတာပါနော်... :D:D
မြန်တယ်ဆိုကျတော်လဲ လေ့လာချင်လို့ပါခင်ဗျာ VB6ကိုသူများတွေပြောနေတာကြာပြီ...အပျင်းကြီးပြီးမလုပ်ဖြစ်တာ မင်းနဲ့ VB6နဲ့သင့်တော်တယ်တဲ့ :D:D ခုတော့အားကျသွားပြီ.... လေ့လာဦးမှ VB6..... တားလဲရေးတတ်တွားပြီ နောက် အကူအညီတောင်းတော့ဝူး.... ဖားလဲမဖားရတော့ ဝူးလို့ ပြောလို့ရအောင် :D:D
အဲဒီ VeVe(အဲအဲ)VB ကို version 6.0 မဟုတ်ဘဲ 5.5 မှာနည်းနည်းတော့ လေ့လာဖူးတယ် .. အဲဒီတုန်းက... C++ နဲ့ တစ်ခြား language တွေရောဘဲ ဒါပေမဲ့..ကျွန်တော်က ဘယ်ဟာနဲ့မှ သိပ်အပေါက်အလမ်းမတည့်လို့ .. သင်တန်းလည်းပြီးရော..ဂျောင်းခနဲ့ဘဲ... VB ကခက်လားလို့မေးရင်တော့ .. အပြင်ပန်းကြည့်ရင်တော့လွယ်တယ်လို့ထင်ရတယ်.. Visual Script Tool လေးတွေနဲ့ဆွဲတယ် နောက်ပြီး အဲဒီ tool ရဲ့ .. option တွေ .. even တွေမှာ နည်းနည်းလိုတာလေးတွေ ဖြည့်တယ်.. ပြီးတော့ F5 လေးနဲ့ RUN ကြည့်တယ် .. မှားရင် Debug error တွေပြတယ်.. compile action မှန်ရင်တော့ ကောင်းကောင်း RUN တယ်ပေါ့လေ.. ကြည့်ရင်တော့ ... ဟုတ်သလိုလိုဘဲ .. ဒါပေမဲ့ .. တကယ့် Inflaction တွေကို အတွင်းကျကျရေးမယ်ဆိုရင် ..မလွယ်ဘူး:65: ... ဒါပေမဲ့ ...အရမ်းလေ့လာဖို့တော့လိုတာပေါ့.. ဒါကအဲဒီခေတ်က ... ဒီနေ့ ခေတ်စား နေတဲ့ASP တို့ .Net တို့ကို လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့ VB အခြေခံသိပြီးသား လူဆိုရင် အရမ်းအားစိုက်စရာမလိုဘူးပေါ့ .. ဦးအောင်မြင့် ရေးတဲ့ VB 6.0 learning CD ခွေတောင် ကျွန်တော့်ဆီမှာ ရှိဦးမယ် .. ကြုံရင်တော့ တင်ပေးပါဦးမယ်...
ဘယ်နှယ့်ပြောပါလိမ့်ဗျာ ..တင်ပေးပါတင်ပေးပါနဲ့တောင်အော်လို့ ရရင်အော်လိုက်ချင်သေး :d:d:d အချိန်မရလဲရဝူး တင်ပေး... မတင်ပေးရင်ငိုမှာ.... တားလေ့လာချင်တော့မှ မတင်ပေးရင် တတက်လုံးခေါ်တော့ဝူး.... (:((:((
chinese font နဲ့ myanmar font တို့ကိုအားလုံးအဆင်ပြေပြေကြည့်လို့ရအောင် ဘာ font သုံးရမလဲ?
onagai မှာတုန်းက စက်တိုင်းမပေါ်တဲ့ font တွေရှိနေလို့ပါ
ပြီးတော့တရုတ်စာရဲ့ phonetic(āГЎǎГ ) ကိုရေးတဲ့အခါဘယ်font ကိုသုံးရင်ကောင်းမလဲ
အဲဒီ နဲ့လုပ်ရင်ကော ဗျာ.. သိသလောက် ၀င်ဖော ကြည့်တာနော်..:D
မဟုတ်ဘူးလေ bro ကျွန်တော်ပြောတာ font ကိုပြောတာ :106:
file expire ဖြစ်နေလို့ ပြန်တင်ပေးပါအုံး အမတော်
ဒီ သရက်က အတော်တော့ ကြာခဲ့ပြီ။ တရုတ်-မြန်မာ အဘိဓါန် လုပ်ကြပါလားလို့ ပြောချင်လို့ပါ။ တရုတ်စာ ရိုက်ပေးဖို့ အတွက် တာ၀န်ယူပါတယ်။ ကျန်တာတွေကတော့ programming သမားမဟုတ်တော့ သိပ်နားမလည်ဘူး။ နိုင်သလောက်တော့ လုပ်ပေးပါ့မယ်။